Zvidzidzo Panyaya Yekugamuchira Vaeni Uye Kunyengetera
JESU ANOSHANYIRA MARITA NAMARIYA
KUGARA TICHINYENGETERA KWAKAKOSHA
Kumabvazuva kweGomo reMiorivhi, makiromita anenge matatu kubva kuJerusarema, kune musha weBhetani. (Johani 11:18) Jesu anoenda ikoko achishanyira Marita nemunun’una wake Mariya. Ivo nehanzvadzi yavo Razaro ishamwari dzaJesu uye vanomugamuchira nemufaro.
Chikomborero chaicho kushanyirwa naMesiya. Marita anotanga kumhanya-mhanya achibikira Jesu nekuti pfungwa dzake dziri pakuti adye zvekudya zvemaoresa. Achibika kudaro, munun’una wake Mariya anogara pedyo netsoka dzaJesu achiteerera zvaari kutaura. Marita anozoti kuna Jesu: “Ishe, hamuna hanya here kuti munun’una wangu andisiya ndiri ndoga kuti ndiite zvinhu izvi? Naizvozvo, muudzei kuti andibatsire.”—Ruka 10:40.
Pane kuti ashore Mariya, Jesu anotsiura Marita kuti ari kunyanya kukoshesa zvokudya achiti: “Marita, Marita, unozvidya mwoyo nokushushikana pamusoro pezvinhu zvizhinji. Zvisinei, zvinodiwa zvinhu zvishoma, kana kungoti chimwe chete. Kana ari Mariya, asarudza mugove wakanaka, uye haazoutorerwi.” (Ruka 10:41, 42) Jesu ari kuratidza kuti Marita haafaniri kuzvinetsa nekubika zvokudya zvakawanda. Kunyange zvishomanana zvinokwana.
Marita haana hake kukanganisa. Ari kuda kuratidza kuti anobata vaenzi zvakanaka. Asi kuramba akaisa pfungwa dzake pazvokudya kuri kuita kuti arasikirwe nedzidziso inokosha yeMwanakomana waMwari. Jesu anosimbisa kuti Mariya agona kusarudza, izvo zvicharamba zvichimubatsira, uye zvinotipawo chidzidzo chatinofanira kuramba tichifunga.
Mumwewo musi, Jesu anotaura chimwe chidzidzo chakati siyanei neichi asi chinokoshawo zvekare. Mumwe mudzidzi anomukumbira kuti: “Ishe, tidzidzisei kunyengetera, sokudzidzisawo kwakaita Johani vadzidzi vake.” (Ruka 11:1) Patopfuura gore nehafu Jesu adzidzisa vadzidzi vake kunyengetera paakataura Mharidzo yake yepaGomo. (Mateu 6:9-13) Zvisinei mudzidzi uyu anogona kunge akanga asipo, saka Jesu anodzokorora zvinhu zvinokosha pakunyengetera. Anobva apa mufananidzo unoratidza kuti nei zvichikosha kugara tichinyengetera.
“Ndiani wenyu angava neshamwari, anoenda kwairi pakati pousiku, oti kwairi, ‘Shamwari, ndikweretesewo zvingwa zvitatu, nokuti shamwari yangu iri parwendo ichangobva kusvika uye handina chokuipa’? Zvino achipindura, uya ari mukati anoti, ‘Rega kundinetsa. Suo ratokiyiwa, uye ini nevana vangu tatorara; handigoni kumuka ndikakupa chero chinhu chipi zvacho.’ Ndinokuudzai kuti, Kunyange asingamuki akamupa chero chinhu chipi zvacho nokuti ishamwari yake, chokwadi nokuda kwokusimbirira kwake iye achamuka akamupa zvinhu zvaanoda.”—Ruka 11:5-8.
Jesu haasi kureva kuti Jehovha anomboramba kutipa zvatinokumbira sezvakaita shamwari iyi. Asi ari kuratidza kuti kana shamwari inombotanga ichiramba ichizopedzisira yapa munhu chinhu chaari kuda, Baba vedu vekudenga vane rudo vachatoteerera zvikumbiro zvevanhu vake vakatendeka! Jesu anoenderera mberi achiti: “Ndinoti kwamuri, Rambai muchikumbira, uye muchazvipiwa; rambai muchitsvaka, uye muchawana; rambai muchigogodza, uye muchazarurirwa. Nokuti munhu wose anokumbira anogamuchira, munhu wose anotsvaka anowana, uye munhu wose anogogodza achazarurirwa.”—Ruka 11:9, 10.
Jesu anobva asimbisa pfungwa yacho nekuenzanisa Jehovha nanababa vepanyika achiti: “Ndibaba vapi pakati penyu, vanoti kana mwanakomana wavo akakumbira hove, vangamutambidza nyoka panzvimbo pehove? Kana kuti akakumbirawo zai, vangamugamuchidza chinyavada here? Naizvozvo, kana imi muchiziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka, kunyange zvazvo makaipa, Baba vari kudenga vachapa vaya vanovakumbira mudzimu mutsvene zvikuru sei!” (Ruka 11:11-13) Izvi zvinotipa chivimbo chekuti Baba vedu vane chido chekutinzwa uye chekutipa zvatinokumbira.
Marita naMariya vakaisa pfungwa dzavo pazvinhu zvipi zvakasiyana, uye tingadzidzei nezvazvo?
Chii chinoita kuti Jesu adzokorore mirayiridzo yaakambopa nezvekunyengetera?
Jesu anopa mufananidzo upi unoratidza kukosha kwekuramba tichinyengetera?
Ona kuti sei tisingafaniri kufunga kuti Mwari haanei nezviri kunetsa munhu mumwe nemumwe.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvidzidzo Panyaya Yekugamuchira Vaeni Uye Kunyengetera